Shiinaha tayo sare leh 21mm Dual Action Car Orbital Random Polisher S21 soosaarayaasha iyo alaableyda. Checheng
Tayada Sare 21mm Dual Action Car Orbital Random Polisher S21
Shayga MAYA: CHE-S21
Our S21 dheer tuuraya DA polisher wuxuu qaataa midka ugu fiican ee X21 laba tallaabo oo wax lagu daro oo lagu daro hal-abuurnimo farsamo oo badan Waxay bixisaa xawaare kala duwan oo ah 0-5300 OPM, xawaare ka dheereeya inta badan nuujiyayaasha suuqa. Awoodda awooda leh ee 900W matoorrada iyada oo loo marayo tan ugu badan ee oksijiin ah ee rinjiga. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku casriyeynay gudaha gudaha Dhamaan Jabka Japan NSK waxaanan xoojinay fiilada korantada si loo hubiyo inay sii socoto imtixaanka waqtiga. Faashad siigada ah iyo godad badan oo hawo-qaadasho ah ayaa lagu daray mashiinka jirka si looga hortago kuleylka soo kordhay. Kicinta horusocodka leh xakamaynta xawaaraha iyo jilitaanka bilawga jilicsan ayaa ka dhigaysa shaqaynta mid ammaan ah oo ku habboon.
Xawaaraha 1.Faster, xoog goynta xoog.
Faleebo siigo si looga hortago boodhka habka wareegga hawada, kaas oo ka ilaaliya mootada dhaawaca.
Nidaamka xawaaraha 6.Constant leh hawl bilowga jilicsan.
7.Soft xajinta dahaarka daboolan iyo xamili, raaxo badan.
Hore: 125mm Portable 900W Portable Gawaarida Gawaarida Korantada oo leh 15mm Tuur S15
Xiga: Xirfadle 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25